Hikatona ny seranam-piaramanidina tranainy indrindra any Sina rehefa miomana ny hanokatra ivon-drivotra lehibe indrindra eran-tany i Beijing
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hikatona ny seranam-piaramanidina tranainy indrindra any Sina rehefa miomana ny hanokatra ivon-drivotra lehibe indrindra eran-tany i Beijing
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Daxing
Ny seranam-piaramanidina tranainy indrindra any Shina, izay nisokatra tamin'ny 1910 nandritra ny fitondran'ny Tarana Qing, dia efa akaiky ho toy ny Beijing Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Daxing, foiben'ny habakabaka lehibe indrindra eran-tany, dia vonona hanokatra ny varavarany.
Ilay seranam-piara-manidina vaovao, izay mitentina 80 miliara yuan (11.3 miliara dolara) ary naharitra dimy taona nananganana azy, dia hahitana terminal lehibe miendrika kintana. Antenaina ho ilay terminal lehibe indrindra manerantany ity trano ity satria manodidina ny 700,000 metatra toradroa ny velarany. Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Daxing iray manontolo dia manodidina ny 47 kilaometatra toradroa, misy lalamby miisa efatra sy tokotanin'ny fijanonana fiaramanidina 268.
Ilay seranam-piaramanidina vaovao goavambe, misy 46 kilometatra atsimon'ny Beijing Tiananmen Square, dia miomana ny hikarakara mpandeha 45 tapitrisa isan-taona amin'ny 2021, ary 72 tapitrisa amin'ny 2025. Manana drafitra fanitarana fatratra izy io, satria antenaina hampiakatra ny fahafaha-manana mpizahatany 100 tapitrisa amin'ny 2040 ity tranonkala ity.
Ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina dia kasaina hatao ny 30 septambra, ny andro mialoha ny faha-70 taonan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, izay homarihin'i Shina amin'ny 1 Oktobra.
Daxing dia ho lasa seranam-piaramanidina iraisampirenena faharoa ao an-drenivohitra sinoa aorian'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Beijing Capital (BCIA). Ity farany ity no seranam-piaramanidina faharoa be olona indrindra eran'izao tontolo izao ary manompo amin'ny maha-ivom-piaramanidina lehibe indrindra ny tanàna, saingy efa feno io.
Satria antenaina hanamaivana ny tsindry amin'ny seranam-piaramanidina Capital i Daxing, tsy hila ny seranam-piaramanidina sivily miaramila-sivily antsoina hoe Nanyuan intsony, izay midika hoe "zaridaina atsimo" amin'ny teny sinoa i Beijing. Nosokafana ny foibem-pitaterana tamin'ny 1910 nandritra ny tarana-mpanjaka Qing, ary izy no nahary ny zokiny indrindra tany Chine.
Nanyuan dia efa ela no lasa seranam-piaramanidina miaramila sy ara-barotra. Tamin'ny taon-dasa, nitantana fitsangatsanganana 6.5 ​​tapitrisa mpandeha an-dranomasina izy, izay “indray mitete monja amin'ny ranomasina” raha oharina amin'ny seranam-piaramanidina goavambe eto an-drenivohitra, hoy i Li Peibin, mpitantana ambony ao amin'ny departemantan'ny marketing ao amin'ny United United Airlines, notanisain'ny China Daily.
Na dia tsy mazava aza ny hiafaran'ny tobin'ny fiaramanidina dia mety ho lasa tantara ara-bakiteny satria azo avadika ho tranombakoka ilay tranonkala.
"Raha ampitahaina amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra sy ny seranam-piaramanidina Daxing, Nanyuan dia manana tantara manankarena sy manokana miaraka amina tantara mahaliana maro atolotra ho an'ny besinimaro ho seranam-piaramanidina voalohany ao Shina, ka nahatonga azy io ho toerana mety indrindra ho an'ny tranombakoka misy fotoam-piaramanidina sivily," hoy i Ma Huidi , talen'ny Centre for China Leisure Studies ao amin'ny China Academy of Art.